Ikkaro - Waxyaabaha guryaha lagu sameeyo iyo DIY
Ikkaro ™ Waa degel internet ah oo aan ku qabsado dhammaan aqoonta aan ku barto mowduucyada aan xiiseeyo. Tijaabooyin, Arduino, jabsasho, dib-u-warshadayn iyo dib u isticmaal walxaha, dayactirka, Motors, Dabeecadda iyo waxyaabo badan oo badan oo aan soo uruurinayey in ka badan 11 sano ee nolosha baloogga
Qalabka software ee LEGO
Faallooyinka iyo qoraallada
Bilowgii Guido Tonelli
Sheekada ugu quruxda badan aduunka
AntennaPod, isha furan ee Podcast Player
Ceterach officinarum ama doradilla
Qalinka 3D ama 3D Qalin iyo caruur
Kuwani waa qoraalladii ugu dambeeyay ee baloogyada. wararka ugu dambeeya ee mowduucyada aan u qoreyno kuwa u xiiseynaya qaabka baloogga ee xiiseynaya sida ay u kala horreeyaan taariikhda mowduucyada.
Mid ka mid ah qaybahayada ugu waaweyn, kan ugu da'da weyn iyo kan aan ugu jeclahay. Waa tijaabooyin aan ku sameyn karno guriga iyadoo la adeegsanayo qalabka caadiga ah.
Imtixaanka guriga, Tijaabooyinka carruurta
Ma shabakad alifaad leh baa?
Haa. Meel looga hadlo waxyaabaha la soo saaray ee guryaha lagu sameeyo, xiisaha leh. Xalalka nolosheenna u fududeeya ama aan u maaraynno xallinta mushkilad oo aannaan haysan qalab ama agab lagama maarmaan ah.
Waxaan dib-u-warshadaynnaa, waxaan u kala furfureynaa farsamooyinka soo-saarkayaga, waxaan soo ururinnaa dhammaan noocyada walxaha ay dadka kale iska tuuraan waanan dib ugu noqonnaa.
Kaliya maahan wax la alifay, laakiin waa qaab nololeed.
Hindisooyin iyo haakooyin yaryar oo maalinba maalinta ka dambaysa nolosheenna ka dhigaya mid fudud ama si fudud u abuuraya una allifaya raaxaysi adigoo og inaad ka heli karto waxyaabaha aad rabto. Si aad caqabad ugu noqoto maskaxdaada.
Qalabka bilowga ah ee Arduino Super Starter Kit UNO R3 Mashruuca Elegoo
Dib u warshadeeyo kormeerihii hore oo deji duulista
Koorsada Shilka ee Barashada Mashiinka
Iskaashiga Google ama Google Colab
Waxaan u arkaa naftayda dabiici yaqaan. Waxaan hayaa boqolaal sawir, buugaag iyo qoraallo ku saabsan dhirta, shimbiraha, xayawaanka, buuraha, wabiyada, cilmiga geology, saadaasha hawada iyo wax kasta oo la xiriira dabeecadda. Qodobbada ku jira qaybtaan, marka lagu daro macluumaadka ku saabsan dhir ama shimbir, waxaa ku jira xog aan ka uruurinayo aragtida iyo tijaabooyinka laga yaabo inaan sameynayo.
Buugaag, Dabeecadda, Faallooyinka iyo qoraallada
Buurta Mediterranean. Tilmaame loogu talagalay dadka dabiiciga ah
Khabiir cilmiga dhulka ku xeel dheer oo uu qoray Nahúm Méndez
Tani waa aag kale oo weyn oo shabakadda ah. Waxaan ka hadlayaa buugaag aan aqriyay iyo xusuus qor aan qaato. Waxay ka badan yihiin dib u eegista, waa sharaxyo aan rabo inaan xasuusto iyo "abuur" buugaag, sawirro, qoraayo, jilayaal, dhacdooyin taariikhi ah oo aan rabo inaan waxbadan ka ogaado.
Fikradaha Journal Bullet
Sida loo kaydiyo maktabadda buugayga
Haddii aad rabto inaad sii waddo ogaanshaha wax kasta oo ka jira Ikkaro:
Dhammaan qaybaha shabakadda
Origami ama origami
Hababka wax -soo -saarka
Xakamaynta raadiyaha iyo dayuuradaha nooca
Ma rabtaa inaad wax intaa ka badan ogaato?
In kasta oo ay u muuqan karto dhammaan casharradan tallaabo-tallaabada ah, Ikkaro waa wicitaan looga cararayo ka-faa'iideysiga.
Taasi waa sababta hacks badan, wax ka beddelka DIY, ikhtiraacyada ama tijaabooyinka bogga aysan lahayn ujeedo gaar ah ama ujeedo faa'iido leh. Waxayse u yihiin raaxo barashada ama si fudud maxaa yeelay waxbaa lagu qaban karaa si la taaban karo inkasta oo.